China Electric hammer drill bit, beton drill bitika, SDS, Max, Hex, percussion bit, perforator, drill bits factory ary mpanamboatra | Boda
Fitaovam-pandavahana tantanana elektrika, bitika fandavahana beton, SDS, Max, Hex, bitika amponga, perforator, bitsika fandavahana
Ny paozy elektrika dia karazana boribory famonoana herinaratra rotary miaraka amina fiarovana azo antoka mifamatotra amin'ny mekanika famonoana pneumatika. Izy io dia afaka manokatra lavaka 6-100 mm amin'ny fitaovana mafy toy ny beton, biriky, vato, sns.
Betsaka ny karazana boriborin'ny borosy herinaratra. Rehefa mandavaka zavatra isan-karazany isika dia mampiasa bitsika fandavahana samihafa. Mazava ho azy fa samy hafa ny karazana bitsika fandavahana. Raha manahy ny amin'ny fividianana sombintsombiny diso isika dia tokony handinika tsara ny pitsipitsony sy ny maodelin'ny tapa-palita elektrika. Amin'ity fomba ity ihany no ahafahantsika mahafantatra raha mila ilay fandavahana kely isika. Andao hojerentsika ny masontsivana sy ny maodelin'ny tapa-pazo elektrika?
Famaritana ny bitika elektrika: 6 mm, 8 mm x 110 mm; 8 mm x 160 mm; 8 mm, 10 mm, 12 mm x 10 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm x 450 mm sns.
Ny tena vatan'ny borosy karbôna vita amin'ny simenitra dia vita amin'ny vy metaly avo lenta, ary ny lohan'ny fanapahana dia ampifangaroina amin'ny karibida simenitra. Azo ampiasaina amin'ny karazana marotoa elektrika izy io. Mety amin'ny fandavahana amin'ny beton, biriky ary fitaovana fananganana mafy hafa izy io. Izy io dia fitaovana fandavahana amin'ny rindrambaiko malalaka sy fahombiazana lehibe amin'ny indostrian'ny fananganana sy ny fametrahana.
Ny famaritana ny napetraka borosy elektrika dia: 5 * 110mm, 6 * 110mm, 6 * 160mm, 8 * 160mm, 10 * 160mm sns.
Boriborintany boribory sy tahony boribory fandavahana martsa elektrika
6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm-28mm sns.
Ny halavan'ny fandavahana rindrina dia 350mm
6. Hammer fandavahana asa roa
Inona no tokony hojerentsika rehefa mampiasa kely ny marotoa elektrika?
1.Matters mila fiheverana amin'ny fampiasana bitika elektrika elektrika - hamafiso raha mifanaraka amin'ny takelaka anaran-tsora famonoana herinaratra mifandraika amin'ny tranokala. Na mifandray ilay mpiaro leakage. Ny bitika fandavahana sy ny mpihazona azy dia hifanaraka ary hapetraka araka ny tokony ho izy.
2.Fampitandremana amin'ny fampiasana fandavahana martsa elektrika - rehefa mandavaka rindrina, valindrihana ary gorodona, ilaina ny manamarina raha misy telegrama na fantsona nalevina. Rehefa miasa amin'ny toerana avo ianao dia tandremo tsara ny fiarovana ireo zavatra sy mpandeha an-tongotra etsy ambany, ary asio fambara fampitandremana raha ilaina izany.
3. Fitandremana amin'ny fampiasana fandavahana fametahana herinaratra elektrika - hamafiso raha tapaka ny switch eo amin'ny marotoa. Raha mandeha ny jiro herinaratra dia hivadika tampoka ilay fitaovana mandeha amin'ny herinaratra rehefa ampidirina ao amin'ny socket power izay mety hiteraka fahavoazana manokana. Raha lavitra ny famatsiana herinaratra ny toerana iasana dia hampiasaina ny tariby fanitarana manana fahaiza-manao ampy sy mahay mametraka azy. Raha mandalo ny lalantsaran'ny mpandeha an-tongotra ny tariby fanitarana, dia hasandratra izy io na horaisina mba tsy ho potika sy simba ny tariby.
BOSENDA Electric Hammer Drill Bit / Concrete Drill Bits / Drill Bits / Electric Drill dia vita amin'ny vy 40Cr sy ny firaka tungsten izay8c tany am-boalohany. Miaraka amin'ny fifehezana henjana ny fizotran'ny hafanana hafanana avo lenta, ny vokatra dia mankafy fitambatra henjana sy henjana, ary tsara ny fitsaboana azy io.
Fitaovana firaka avo lenta no ampiasaina hanamboarana ny boroka maranitra sy tsy mahazaka akanjo, hanitatra ny androm-piainana ary hanatsara ny fanoherana misy fiantraikany.
Ny fonosana dia matetika ao anaty fantsom-plastika fotsy, ary azo namboarina ihany koa arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa.
Ny karazana boribory hafa dia vita amin'ny vy karbonika. Fa ny boroka 40Cr dia manana endrika milamina kokoa sy fiainana serivisy lava kokoa imbetsaka noho ny fitrandrahana vy vy.
Fampiharana vokatra: be mpampiasa amin'ny fandavahana amin'ny marbra, granite, beton, simenitra, rindrina biriky ary fitaovana hafa.
Ny tahony dia manana max, SDS, hex ary fanamboarana tsy mahazatra.
Fanamarihana: ny hatevin'ny marbra dia tsy maintsy mihoatra ny 50 mm, ary ny fanamafisana dia tokony hialana amin'ny fandavahana amin'ny beton.
BOSENDA Electric Hammer Drill Bit dia manome habe feno. Afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny filàna rehetra amin'ny fandavahana kely.
Previous: Fitrandrahana fantsom-pandrefesana, fantsom-bozaka vita amin'ny fantsom-baravarankely, fantsom-borosy vita amin'ny vera vita amin'ny keramika, fitrandrahana vy, fitrandrahana Overlord, fitrandrahana rindrina marbra, fahitana lavaka karbida vita amin'ny simenitra
Manaraka: Boribory efatra sy zana-kazo broch efatra vita amin'ny hazo, telo boribory boribory efatra, boroka hazo